प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निभाउन सकेनःडा.लोहनी – Online Nuwakot
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निभाउन सकेनःडा.लोहनी
प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निभाउन सकेनःडा.लोहनी
अनलाइन नुवाकोट माघ २८ २०७७, बुधबार १४:५१
रााष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रतिपक्षमा रहेर पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धर्म ननिभाएको बताए । नुवाकोटको विदुरमा रााष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नुवाकोटद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. लोहनील संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएकोथाहा पाउदा पाउदै पनि प्रतिपक्ष मौन बस्दा देशमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने बताए ।
उनले अहिले देशमा नयाँ संविधान बनेपछि जनताले शाान्ति स्थाइत्व र शुसासन कायम हुन्छ भन्ने विश्वास लिएपनि त्यसको ठिक विपरित कुशासन र भुइबुट्टा वर्गको मात्र आर्थिक विकास भइरहेको बताए ।
लोहनीले देशमा संवैधानिक संकट देखिएकोले देशमा अराजकता देखिने बताए । उनले देशलाई दुर्घटनबाट बचाउन प्रजातन्त्रीक रााष्ट्रवादी शक्ति आवश्यक रहेको बताए । उनले जनताले शासन गरेपनि नेपालको लागि संवैधानकि राजतन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
नुवाकोटमा आज राप्रपाको झण्डोत्तोलन र चुनाव चिन्ह अनावरण
झण्डोत्तोलन र चुनाव चिन्ह अनावरण गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘देशमा बलियो प्रजातान्त्रिक शक्तिको अहिले आवश्यकता रहेको बताए ।
नेकपाले जनताले गरेको बिश्वासको कुठाराघात गर्दा पनि प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रसले त्यसको चासो नदिएको कारणले जनता दुवै पार्टि बाट बाक्क भएकोे बताए । डा. लोहनीले बिकल्पमा अब जनताले राप्रपा खोजेको बताएका छन् । देशलाई जोगाउन संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको भन्दै राप्रपाका एजेण्डाहरु स्पष्ट रहेको बताए । उनले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था नेपालको लागि आवश्यक रहेको बताए । संवैधानिक राजसस्था आवस्यक भएको भन्दै उनले ‘नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि, हाम्रा विविधताको बीचमा एकता गर्नका लागि एउटा निस्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको आवश्यकता रहेको कारण हामीले संवैधानिक राजसंस्था भनेको हो डा. लोहनीले भने । अब राप्रपाको झण्डामा गाई र चुनाव चिन्ह हलो रहने छ ।